Maxaa ka jira in Wasiirka Amniga loo diyaarinayo Madaxweynaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Maxaa ka jira in Wasiirka Amniga loo diyaarinayo Madaxweynaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe
Maxaa ka jira in Wasiirka Amniga loo diyaarinayo Madaxweynaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe
September 17, 2016 admin470
Ilo wareedyo ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in Madaxtooyada ay ku qal-qaalineyso in C/risaaq Cumar Maxamed inuu isku sharaxo xilka Madaxweynaha Maamulka labada Gobol ee Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Illaa afar Musharax ayaa illaa iyo haatan ku dhawaaqay inay yihiin Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kuwaasoo haatan ku sugan magaalada Jowhar.
Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa la sheegayaa in Madaxweynuhu ku tashanayo Xildhibaanada ka imaan doono, waxaana haatan muuqata in lagu loolami doono Xildhibaanada 32-xubnood ee Aqalka hoose, kana imaan doona Gobolka Hiiraan.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lagu xusuustii in taageeradii uu ku lahaa doorashadii Madaxweynaha Galmudug C/kariin Guuleed, haatana uu wato Musharax kale maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaase la ogeyn sida uu tanina ugu guuleysan doono.
Dad badan ayaa aamisan in hadii uu hirgalo dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inay ka dhigan tahay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu tallaab u qaaday inuu mar kale soo laabto.
Maxkamada ciidamada qalabka sida oo xukun ku ridey rag ka tirsanaa ururka IS
Fernando Torres: "Atletico Madrid diyaar ayey u tahay Barcelona"
Hanti-Dhowrka Guud:” Musuqmaasuq baahsan ayaa ka jira Doorashada dalka ka socota”
Qaad ka dagay Soomaaliya inkastoo Dowladu mamnuucday
Madaxweyne Xaaf Oo Maanta Gaaray Magaalada Gaalkacyo ( Dhageyso)
October 16, 2018 October 16, 2018 News Editor